realestate - Myanmar Mega Property Co., Ltd
Posted on September 29, 2021 September 29, 2021 .by San Aung. No comments yet	.
သူတစ်ပါးအမည်ငှား/အမည်ခံဖြင့်လွှဲပြောင်းခြင်း(Binami transaction )-အိမ်၊ခြံ၊မြေ၊အစရှိသည့်ပစ္စည်းများကိုဝယ်ယူရာတွင်မိမိ၏အမည်ဖြင့်စာချုပ်စာတမ်းပြုလုပ်ချုပ်ဆို၍ဝယ်ယူရန်ဖြစ်သော်လည်းအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်အိမ်၊ခြံ၊မြေ၊ဝယ်ယူသူသည်မိမိ၏အမည်ဖြင့်မဝယ်ယူဘဲစာချုပ်၌ဝယ်ယူသူနေရာတွင်မိမိ၏သား၊သမီး၊အမည်ဖြင့်လည်းကောင်း၊မိမိ၏ညီအစ်ကိုမောင်နှမအမည်ဖြင့်လည်းကောင်း၊မိမိ၏တူ၊တူမအမည်ဖြင့်လည်းကောင်း၊အဆုံးစွန်ဆုံးမိမိယုံကြည်စိတ်ချရသည့်သူတစ်စိမ်းအမည်တို့ဖြင့်အမည်ခံ၍ဝယ်ယူလွှဲပြောင်းခြင်းကို”အမည်ငှား/အမည်ခံဝယ်ယူလွှဲပြောင်းခြင်း(Binami transaction)ဟု “ပစ္စည်းလွှဲပြောင်းခြင်းအက်ဥပဒေ”(The transfer of-property Act )ပြဌာန်းဥပဒေတွင်ပြဌာန်းပါရှိပါသည်။သူတစ်ပါးအမည်ငှား/အမည်ခံဖြင့်လွှဲပြောင်းခြင်းပြုလုပ်ဆောင်ရွက်မှုသည်ဆောင်ရွက်သည့်လတ်တလောအချိန်တွင်မည်သည့်ပြဿနာ၊မည်သည့်အငြင်းပွားစရာကိစ္စများပေါ်ရန်မရှိသော်လည်းအချိန်ကာကြာလာခဲ့သည့်တစ်ချိန်ချိန်တွင်ယူသူအစစ်အမှန်နှင့်အအမည်ငှား၊အမည်ခံတို့အကြားမလိုလားအပ်သောအငြင်းပွားဘွယ်ရာကိစ္စရပ်များပေါ်ပေါက်လာခဲ့၍တရားမတရားရုံးများ၌အမည်ခံ/အမည်ငှားဖြစ်ကြောင်းတရားတစ်ဘောင်စွဲဆိုအငြင်းပွားသည်အထိဖြစ်ခဲ့ရသည်ကိုစီရင်ထုံးသာဓကများအရလေ့လာဖတ်ရှုခဲ့ရပါသည်။အမည်ငှား/,အမည်ခံ(Binami)ကိစ္စကိုတရားရုံးများကစီရင်ထုံးအချို့ဖြင့်ခွဲခြားခဲ့ပါသည်၊(၁)အမည်ငှားစနစ်ဖြင့်အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ရန်အကြောင်းရှိ/မရှိ။(၂)အမည်ငှားပိုင်ရှင်အစစ်အမှန်တို့နှစ်ဦးနှစ်ဘက်ဆက်ဆံဆက်စပ်ပုံအရပိုင်ရှင်အစစ်အ မှန်ဖြစ်သူကအမည်ငှား/အမည်ခံသူကိုအမည်ငှား/အမည်ခံအဖြစ်ရွေးချယ်‌ရန်အ ကြောင်းရှိ/မရှိ။ (၃) ဝယ်ယူခဲ့သည့်အိမ်၊ခြံ၊မြေ၊နှင့်ပတ်သက်၍ချုပ်ဆိုထားခဲ့သည့်စာချုပ်စာတမ်းမူရင်း များ၊ဆက်စပ်စာချုပ်များ၊ပိုင်ဆိုင်မှုစာရွက်စာတမ်းမျး၊မည်သူ၏လက်ဝယ်၊မည် သူ့ထံတွင်ရှိသည်/မရှိသည်။(၄)ဝယ်ယူခဲ့သည့်အိမ်ခြံမြေသည်လက်ရှိတွင်မည်သူ၏လက်ဝယ်ရှိနေသည်။(၅)အိမ်ခြံမြေဝယ်ယူသည့်ပစ္စည်းဖိုးငွေအားမည်သူ့ထံမှရရှိသည်။- – -စသည့်အချက်များအပေါ်အခြေခံမှတ်ကျောက်တင်သုံးသပ်ကြပါသည်။အောက်ပါစီရင်ထုံးများမှာကြည့်ပါ။(၁)ရန်ကုန်၊အတွဲ(၇)၊စာ-၇၉၇၊(၂) ၁၉၄၉-ခုနှစ်၊(လွှတ်တော်)စာ-၄၁၁၊(၃)၁၉၆၇၉-ခုနှစ်(ရုံးချုပ်)စာ-၁၄၈၊ #crd ဥပဒေဗဟုသုတ…
“#အမွေခွဲပေးဖို့ အရေးကြီးပုံ”(မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ဦး ကျန်ရစ်သော အမွေပုံပစ္စည်းအား တရားရုံးတော်မှ စီမံခန့် ခွဲပေးစေလိုမှု) #၁။ အမွေဆက်ခံရေးသဘောတရားမြန်မာ့ဓလေ့ထုံးတမ်း ဥပဒေ၌ လူတစ်ယောက်သေဆုံးလျှင် မည်သူ အမွေခံဖြစ်သည်၊ မည်သည့်အစီစဉ်နှင့် မည်မျှ အမွေဝေစုရမည် စသည်ဖြင့် အတိအကျ သတ်မှက်ခြင်း ဖြစ်သည်။…
ဂရန်ဆိုတာ ဘာလဲ မသိတဲ့အပြင် ကြေးတိုင်နဲ့ မြေစာရင်းက ဂရန်ပေးတယ်လို့ ထင်နေသူတွေံ အများကြီး တွေ့နေရပါတယ်။ မြေစာရင်းက ဂရန်ပေးခွင့် မ၇ှိပါ။ တည်ဆဥပဒေများတွင် အာဏာ အပ်မထားပါ။ အ ကြောင်းတစ် ရပ်အတွက် သက်သေခံအဖြစ် ကူးပေးရတဲ့…
ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ မိမိဝယ်ယူလိုတဲ့မြေကွက်ကို အမည်ပေါက်ဘယ်သူလဲ၊မြေပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်အထား၊ စာရွက်စာတမ်းတွေစုံ/မစုံ၊ မူရင်းစစ်မှန်မှုရှိ/မရှိ၊ အရှုပ်အရှင်းကင်းမကင်း၊ မြေပုံ/မြေရာဇဝင်နဲ့ စည်ပင်သာယာ (သို့မဟုတ်) မြေစာရင်းရုံးရဲ့ နောက်ဆုံးမှတ်တမ်းမှာ ဘယ်လိုရေးသွင်းမှတ်သားထားလဲ ဆိုတာတွေကို တိကျရှင်းလင်းစွာ စစ်ဆေးရပါမယ်။မြေခွန်၊။ အိမ်ခွန်ကြွေးကျန် ရှိ/ မရှိနဲ့ ဂရန်သက်တမ်း ကိုလည်း…
Posted on September 27, 2021 September 27, 2021 .by San Aung. No comments yet	.
#အိမ်ခြံမြေအရောင်းအဝယ်ပြုကြရာမှာ#ဂရန် မြေ၊# ဘိုးဘွားပိုင်မြေ၊ #ပါမစ်မြေ၊ #စလစ်မြေ အမျိုးမျိုးရှိတဲ့အထဲက #ပါမစ်မြေကို အရောင်းအဝယ်အများဆုံး ပြုလုပ်ကြတာ တွေ့ရပါတယ်။ ရောင်းအားကောင်းတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ ပါမစ်မြေအရောင်းအဝယ်လုပ်တဲ့အခါ စရိတ် ကုန်ကျမှုနည်းခြင်းက အဓိကအချက်ဖြစ်တယ်။ အရောင်းအဝယ် စာချုပ်ကို အရပ်ကတိစာချုပ်နဲ့ ချုပ်ဆိုနိုင်ပြီး အဆင့်ဆင့်လွှဲ…
“#တိုက်ခန်းအရောင်းအဝယ်မှာ#အခွန်ဆောင်ရပါသလား” ဟု မိတ်ဆွေတစ်ဦးက စာရေးသူထံ လာရောက်ဆွေးနွေးလာပါသည်။”တိုက်ခန်း ဝယ်ရောင်းလုပ်ဖို့ စိတ်ကူးလို့လား”စာရေးသူက မိတ်ဆွေအား မေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။”ဝယ်ရောင်းဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တော့ မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် အခုကာလက တိုက်ခန်းတွေ အဝယ်မလိုက်တော့ ဈေးသင့်တာနဲ့ ဝယ်ထားမလားစိတ်ကူးလို့ပါ””မှန်ပါတယ်။ အရင်ကာလ ထက်တော့ အိမ်ခြံမြေတိုက်ခန်းတွေ…
စိန်၊ရွှေအစရှိသည့်ရွေ့ပြောင်းနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပေးကမ်းတဲ့နေရာမှာစာချုပ် ချုပ်ပြီးပေးကမ်းလို့လည်းရတယ်၊စာချုပ်မချုပ်ဘဲလည်းပေးလို့ရပါတယ်။ မြေ၊အိမ် အစရှိတဲ့မရွေ့မပြောင်းနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတစ်စုံတစ်ရာကိုပေးကမ်းမယ်ဆိုလျှင်တော့ပေးကမ်းခြင်းစာချုပ်ပြုလုပ်ရပါမယ်။ပေးကမ်းစာချုပ်ဟာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ရပါမည်…… ၁။ စာချုပ်စာတမ်းပြုလုပ်ရပါမည်။ ၂။ အနည်းဆုံးသက်သေ၂ယောက်လက်မှတ်ရေးထိုးရပါမည်။ ၃။ အလိုအလျောက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မေတ္တာသက်၀င်မှုအရပေးတာဖြစ်ရပါမယ်။ ၄။ ပစ္စည်းရသူ ဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကပစ္စည်းပေးကမ်းတာကိုသဘောတူတဲ့အကြောင်း၊လက်ခံတဲ့အကြောင်း ဖွင့်ဟ၀န်ခံပြီး လက်မှတ်ရေးထိုးရပါမည်။ ၅။ စာချုပ်ကိုရေစစ္စရီမှတ်ပုံတင်ပြုလုပ်ရပါမည်။ စာချုပ်ချုပ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့တံဆိပ်ခေါင်းအလုံအလောက်ထမ်းဆောင်ဖို့လိုပါတယ်။တံဆိပ်ခေါင်းအက်ဥပဒေဇယား-၁၊အပိုဒ်၃၃အရပစ္စည်းရဲ့တန်ဖိုးအပေါ်မှာခေါင်းပါစာချုပ်နဲ့ရေးသားချုပ်ဆိရပါမယ်။ ပစ္စည်းပိုင်ရင်အနေနှင့်မိမိပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုမိမိဆန္ဒအလျောက်ပေးကမ်းခွင့်ရှိတယ်လို့အခြေခံသဘောအားဖြင့်ဆိုရမှာဖြစ်ပေမယ်ိ့မိပိုင်ပစ္စည်းအားလုံးပေးခွင့်…